Ingxaki yeLufthansa Pack
umbuzo Ingxaki yeLufthansa Pack
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #731 by bgf
Ndifake ipakethe yaseLufthansa ngaphesheya kwaye ndinenkinga nge-Airbus A380.
Xa ndicinezela iqhosha kwi-cockpit ukuze i-NAV, COM, i-AD, njl njl. Oko kuthetha ukuba andinakuzibeka ezi parameters.
Ngaphandle koko le moya intle kwaye ndifuna ukuyisebenzisa rhoqo.
Mhlawumbi umntu unokundinceda?
Ixesha ukwenza page: 0.260 imizuzwana